Zvoga Kuchengeta uye Kudzosa System (AS / RS))
AS / RS ndiko kubatanidzwa kwazvino tekinoroji yekuchengetera uye zvishandiso. kureba kunogona kusvika pamamirimita makumi mana kana kupfuura, ikashandisa nzvimbo zvakanyanya, nekudaro inatsiridza mashandisiro enzvimbo uye kugona zvakananga. iyo yekuchengetedza kumusoro, otomatiki uye mashandiro zviri nyore.
zvinosanganisira: iyo rack system, stacker (nharembozha masherufu, redhiyo shuttle ngoro, AGV kana RGV nezvimwewo) michina michina, conveyor (kuronga) system, uye komputa yekudzora system nezvimwe.
Zvizere otomatiki: kushandisa otomatiki stacker muchina kutsiva chakagadzirwa kuchengetedza zvinhu nekutora, nekukurumidza uye inoshanda. Sezvo vashandi havafanirwe kupinda mune yekuchengetera basa, zvakanyanya kugadzirisa nharaunda yebasa.
Kururamisa kwepamusoro: AS / RS inogadzirisa zvinhu mukati meWMS neWCS, inowedzera kwazvo manejimendi manejimendi yezvinhu. kunatsiridza kururamisa uye kuvimbika, mukati-kunze kwekuchengetera manejimendi, uye rondedzero basa rinotendeuka nyore uye nekukurumidza, zvese simba rekushanda rakaderedzwa zvakanyanya.
Inoshanda uye yakarongeka: AS / RS ine yekufambisa (kuronga) system, mukati-kunze kuchengetera nekukurumidza uye nenzira kwayo.
Zvakareruka uye zvirinyore: AS / RS inongoda shoma shoma yekushandisa uye yekuchengetedza matanda, inochengetedza mushandi nemari
Matatu-eenzvimbo masherufu, njanji mugwagwa stacker, mune-uye-kunze kwepallet conveyor system, saizi yekuona bha kodhi kuverenga system, kutaurirana system, otomatiki kutonga system, komputa yekutarisa system, komputa manejimendi system uye zvimwe senge waya uye tambo tareyi simba rekugovera kabati , tireyi, kugadzirisa Complex otomatiki sisitimu ine zvishandiso zvekubatsira senge mapuratifomu uye simbi mamiriro mapuratifomu.
Uchishandisa yekutanga-kirasi yakasanganiswa logistics pfungwa, uchishandisa yepamusoro kudzora, bhazi, kutaurirana uye ruzivo rwetekinoroji, kuburikidza neakaganhurirwa chiito chemidziyo iri pamusoro kuita basa rekuchengetera.
◆ Yakazara otomatiki.
◆ Inoda WMS software kudzora system.
◆ Inogona kuwedzera kukwirira kwedura, kunze kwenyika mutengo uye mutengo wevashandi.
◆ Tinogona kupa dhizaini uye kuverenga.
Pashure: HEGERLS radio shuttle mumhanyi
Sezvo / maRs